Weydii M. Night Shyamalan wax alla wixii aad ka rabto AMA ee ku saabsan Adeegga on Reddit | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah taxanaha guusha ugu badan ka gaaraya Apple TV + waa adeege, taxane ah kaas premiered xilli ciyaareedkii labaad toddobaadyo ka hor. Thanks to horudhacaas, dhagaystayaasha Apple waxay sii kordhayaan usbuuc walba marka ay Apple kujirto dhacdo cusub xilli ciyaareedkii labaad.
Haddii aad taageere u tahay taxanahan oo aad si fiican ugu hadashid Ingiriisiga, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso kaqeybgalka AMA (Weydii Wax Kasta) oo lagu abaabulay Reddit oo ku saabsan taxanaha Adeegga, halkaas oo qof kastaa wuu weydiin karaa M. Night Shyamalan dhinac kasta oo la xiriira taxanaha (markaa waxaa jira qodobka nasiibka ama in su'aasha aad xiiseyneyso inaad ka jawaabto).
Dhacdadani waxay dhici doontaa berri, Khamiista, Febraayo 11 markay tahay 9 subaxnimo Waqtiga Baasifigga / 12 galabnimo Xeebta Bariga iyada oo la marayo r / ADEEG. Dhacdadani waxay dhacdaa hal maalin ka hor bilowga qaybta shanaad ee xilli ciyaareedka labaad, dhacdo ah, sidii tii hore, Waxaa Director ka ahaa Shyamalan.
Gudaha AMA kaliya agaasimaha ayaa la heli karaa iyo madaxa taxanaha. Jilayaasha taxanaha ah ee Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free iyo Rupert Grint.
Taxane bilaa abaal marin ah
In kasta oo ay guuleysatay taxanahan labadaba kuwa dhaliil iyo saxaafadda takhasuska leh, taxanaha Addoonku ma helin wax abaalmarin ah. Xaqiiqdii, waxay heshay hal magacaabis oo loogu talagalay Abaalmarinta Abaalmarinta Golden Reel ee sanadkii hore qaybta loogu talagalay tafatirka dhawaqa ugu fiican.
Waqtigana waxay umuuqataa sanadkan sidan ayuu ku sii socon doonaa, Maaddaama magacaabista abaalmarinta Emmy aysan ka fikireynin Addoon, kaliya Ted Lasso, oo taxane ah oo loo magacaabay Majaajillada ugu Fiican iyo Jilaaga Ugu Qosolka Badan Jason Sudeikis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Weydii M. Night Shyamalan at AMA on Servant on Reddit